भिखारी गिरफ्तार - परिहास - नेपाल
अब नेपालमा भीख माग्नु पनि अपराध ठहर भएछ । कसैले कहीँ बसेर भीख मागेको देखियो भने समातेर जरिवाना तिराउने र जेल हाल्नेसम्मको कानुन बनेको रहेछ । नेपाल सायद भिखारीमुक्त मुलुक बन्छ होला । तसर्थ, यसलाई गरिबी निवारणको एक अचूक उपायको रुपमा पनि लिन सकिन्छ ।
एक हूल प्रहरी बिहानैदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तैनाथ छन् । प्रहरीको त्यो चर्को तैनाथी देखेर कसैले सोधेछ, “यत्रो प्रहरी किन सर ?”
प्रहरीले जवाफ दियो, “भिखारी पक्रन ।”
नभन्दै विदेशबाट आएको एउटा विमान अवतरण भयो । यात्रुहरु ओर्लिए । त्यसै विमानमा हाम्रा अर्थमन्त्रीज्यू पनि आउनुभएको रहेछ । यात्रुहरु धमाधम बाहिर निस्कादै गए । जसै अर्थमन्त्रीज्यू बाहिर आउनुभयो, प्रहरीले उहाालाई च्याप्प समाते । अनि भने, “हलचल नगर्नुहोला मन्त्रीज्यू, तपाईं एरेस्ट हुनुभएको छ ।” “एरेस्ट ? किन ? राष्ट्रपतिले कू गरे कि क्या हो ?” मन्त्रीज्यू चकित पर्नुभयो ।
प्रहरीले भने, “कू होइन मन्त्रीज्यू । हामीले भर्खरै पत्रिकामा पढ्यौँ, तपाईंले विदेशमा गएर भीख माग्नुभएको रहेछ । तपाईंलाई थाहा छ कि छैन, अहिले नेपालमा भीख माग्नु पनि अपराध ठहर भइसक्यो । तपाईंले त झन् विदेश गएरसमेत भीख माग्नुभयो । त्यही अपराधमा एरेस्ट गर्नुपरेको हो । हलचल नगरी अगाडि बढ्नुस् है ।”
नयाँ कानुनले यसो गर्‍यो भने कसो होला ?